Hebei Kexing Pharmaceutical Co., Ltd., yakavambwa muna 1996, iri yepamusorosoro private zvebhizimisi kusanganisa ari R & D, gadzira uye Marketing mhuka mhuka utano. Kambani yedu yakawana kuvimba nekutsigirwa kubva kune vakawanda vatengi neepamusoro-soro kutanga, kwakakomba uye kwesainzi manejimendi, yakanakisa chigadzirwa mhando uye brand-nyowani aftermarket sevhisi.
Kambani yedu ine yepasi rose yekutanga-kirasi kugadzirwa kwekugadzirisa zvirimwa. Isu tinoisa RMB60 mamirioni mukuvaka iyo GMP huru chirimwa inoumbwa nemahara mana, iine huwandu hwenzvimbo ye77555 mativi emamita. Muti wedu ndeimwe yemiti mikuru yekugadzirira mishonga yemhuka muChina. Pakati pavo, pane mitsara mitanhatu yekugadzira zvichiteerana jekiseni remvura, hombe yekumukisa, mvura yemumuromo, hupfu, mapiritsi uye mishonga inouraya utachiona; mitsara mitatu yehupfu.
Kuburitsa kwegore rinotevera: jekiseni rinosvika mamirioni gumi nemashanu ematani; kuzarirwa kukuru kunosvika mabhiriyoni zana nemakumi mashanu emabhodhoro, mahwendefa anosvika zvidimbu zvemamirioni zana nemashanu, hupfu hunowana matani mazana matanhatu uye zvigadzirwa zvemumagaba zvinowana matani zana nemazana maviri.
Yakazara kukosha kwekugadzira inosvika anopfuura mazana emamirioni zana nemakumi mashanu. Mitsetse yedu misere ine simba yekugadzira yapfuura kuburikidza neGMP certification yeNational Ministry of Agriculture panguva imwechete kubva munaGunyana 2004. Project chikamu 2, kusanganisira imwe TCM yekuchera mutsetse uye imwe yehupfu yekugadzira mutsetse, yakazara hofisi zvivakwa uye dzimba dzemhuka bvunzo, ichasimudzira iyo R&D uye gadzira kugona kwekambani yedu kumberi, uye kumisikidza hwaro hwakasimba hwekuvandudza kutengeserana kwekutengesa kunze.
Kexing ichachengetedza kugadzirwa kwakachengeteka uye kugovana zvinoshamisa mangwana nevatengi vese!
Rudzi rwebhizinesi: Mugadziri, Trade Kambani
Chigadzirwa Chigadzirwa: Orthopedic Nzira Dzokuvhiya, Veterinary Mushonga
Zvigadzirwa / Sevhisi: Jekiseni jekiseni, Veterinary Solution, Veterinary Powder, Veterinary Hwendefa, Veterinary Disinfectant, Veterinary Premix
Vashandi Vese: 201 ~ 500
Nheyo (Miriyoni US $): 50,000,000RMB
Gore rakasimbiswa: 1996
Kero Kambani: NO.114 Changsheng Street, Luquan Development Zone, Shijiazhuang, Hebei, China
Avhareji Yekutungamira Nguva: Peak mwaka inotungamira nguva: 0, Off mwaka inotungamira nguva: 0
Yegore Rekutengesa Vhoriyamu (Miriyoni US $): US $ 50 Miriyoni - US $ 100 Mamirioni
Yegore Rekutenga Vhoriyamu (Miriyoni US $): US $ 10 Miriyoni - US $ 50 Million
Main Misika: Africa, America, Asia, East Europe, Middle East, Oceania, Mamwe Misika, West Europe, Pasi Pose
Nha. Yekugadzira Lines: 14
Kwete yeQC Vashandi: 41 -50 Vanhu
Saizi yeFekitori (Sq.meter): 30,000-50,000 mativi emamirimita
Fekitori Nzvimbo: 114 Changsheng Street, Luquan Development Zone, Shijiazhuang Guta, Hebei